Cunnilingus को लागी छ
Kunilingus एक साधारण पाठको लागि एक जटिल नाम हो। क्युनिलिङ्गस भाषामा स्त्री जेनेटिअलियाको स्नेह हो, जुन, सिद्धान्तमा, यो व्यवसायको मानवजातिको सुन्दर आधा भाग गर्नु पर्छ, तर, केहि कारणले गर्दा धेरै महिलाहरूले मानिसको यस्तो फ्रिक प्रस्तावहरू अस्वीकार गर्छन्। कारणहरू धेरै हुन सक्छन्:
असन्तुष्ट पार्टनर - क्लटरिसको सहारा मजाक नहुन सक्छ, बाहेक साथीले तपाईलाई खुसी पार्छ;
गलत मुद्रा - वास्तवमा, हरेक महिलाको लागि केवल कुन्निलिंगसको लागि केवल एक पोल हो, उच्चतम आनन्द दिने।
असन्तुष्ट पार्टनरको साथ, यसलाई आफैंलाई क्रमबद्ध गर्नुहोस्, र हामी तपाइँलाई प्रस्तावित केहि मध्ये केहि प्रयास गरेर तपाईंको खुट्टा कसरी पत्ता लगाउने छौँ।
कामसूत्रको कुन्निलिङ्गसका लागि पहिलो पोर्टल एक क्लासिक पोज हो, जब एक महिला उनको पछाडीमा छ, उनको खुट्टा चौडा फैलाउँछ, र मानिस उनको खुट्टा बीच बसिरहेको छ। यो सरलतम खुट्टा हो, तपाईंलाई अक्टोबाकिक्स र भारतीय लचीलापनको आवश्यकता पर्दैन, जस्तै कि कुमार सूत्रका पानाहरूमा, र यो उनीसँग हो कि तपाइँ "प्रशिक्षण" कुन्निङ्गुलस सुरु गर्नुपर्छ।
यो स्थितिमा, पुरुष महिला जेनेटियसियामा पूर्ण पहुँच हुन्छ, तर यदि तपाइँ पूर्णतया प्रसन्न हुनुहुन्छ र तपाईले समय गुमाउनु हुन्छ भने, तपाईंको साझेदार धेरै खराब गर्दन पाउन सक्छ। यसको लागि अधिक सहज हुनको लागी, बत्तीहरूमा एक तकिया राख्नुहोस्।
Cunnilingus को लागि सबै भन्दा राम्रो छ, किनकी महिला अझै अझै खुसी छ, र यो मा मान्छे पनि सहज छ। साथी आफ्नो पछाडि बाहिरी भित्र निस्किन्छ, मान्छे बिस्तरको खुट्टामा तल घुँडामा बस्छ। उहाँले आफ्ना कंधेहरूलाई साझेदारको बाक्लो पैरहरू फ्याँक्नुहुन्छ र क्लिटरिसलाई स्वतन्त्र रूपमा व्यवहार गर्नुहुन्छ।
गोजी गहिरो चुम्बनका लागि सुधार गर्न सकिन्छ। पुरुषले महिला श्वसन लिफ्ट गर्दछ र उनीहरूले कंधे ब्लेडमा बसमा राख्छन्। उनको साझेदारले आफ्नो सम्पूर्ण शरीरको स्वामित्व, डाइरेक्टिङ र मोरङ लगाउँछन्, जुन उसले प्रसन्न गर्दछ।
"पहाड स्ट्रीम" पोज गर्नुहोस्
यसको लागि तपाईंलाई कम सोफे चाहिन्छ। "माउंटेन क्रीक" जोनहरू द्वारा छनौट गरिएको छ जो कि क्युनिलिअससका लागि कस्तो पोष्ट हुन्छ जुन जेनेटिटहरूको लामो समयसम्म लामो समय सम्मको लागि उपयुक्त हुन्छ।
महिला सोफेमा छ, पुरुष भुइँमा बस्छ र तिनको खुट्टा फैल्छ। उनले साथीको खुट्टालाई माछा चढाउँछन्, उनीहरूका कंधेहरूमा फेंकन्छन्, र तिनको बट्टाहरू समात्न उसलाई निर्देशन दिन्छन्। यस मुद्रा को सुंदरता यो हो कि एक पुरुष को घुटने (जो प्यार कोष मा पनि धेरै थकावट छैन), र तपाईंको आनंद पनि लामो समय हुनेछ।
"69" पोज गर्नुहोस्
क्युनिङससको लागि पोस 69 - शैलीको एक क्लासिक, पुरुष र महिलाको समानतालाई सम्बोधन गर्दै वा बरु अनियमित सुखको पारस्परिक अधिकार। एक व्यक्ति उनको पीठ मा छ, एक महिला उसलाई अनुहार बस्छ, उनको अनुहार उनको अनुहार मा। त्यो अगाडी झुकाउँछ, आफ्नो लिंगको मुखमा लिन्छ, र, वास्तव मा, आफ्नो आफ्नै व्यवसायमा व्यस्त छ। यसकारण, साझेदारले साझेदारको अनुहारमा आफ्नो प्वालस बढाउँदछ र उसले चुम्बन संग स्नान गर्न र उनको जेनेटिटको जिब्रो गुमाउन थाले।
वैसे, जननांग क्षेत्र मा चकलेट को अनुभूति एक महिला को दोष छैन, तर यसको विपरीत, मजबूत उत्तेजना को संकेतक। सबै भन्दा सजिलै उत्तेजित महिलाहरू, प्रायः महसुस गर्छन् जस्तो लाग्छ कि उनी प्रेम प्रेमको समयमा चकित हुन्छन्।
यस स्थितिमा, स्त्रीले उनको टाउको माथि घुट्छ, पुरुषहरू उनको छेउमा उभिए। यस स्थितिमा, मानिसले सबैलाई पनि केहि गर्न आवश्यक छैन, केवल आफ्नो जिब्रो राख्नुहोस्। साझेदार एक पूर्ण प्रभावशाली छ, त्यो फिर्ता आउन सक्छ, र गहिरो घुमाउन साझेदार दिन सक्छ। प्राय: यो पोष्ट मनोरञ्जन मजा र भूमिका खेलिरहेको खेलहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। धेरै महिलाहरू विशेष गरी उनीहरूको पार्टनर ह्यान्डकफाइ वा बिस्तारमा बाँधेर खुसी हुन्छन्। यद्यपि, एक तर्फबाट, यसले एक व्यक्तिलाई आफ्नो हातले एउटी महिलालाई सम्भावित पार्छ, तर साथीको शक्तिको उत्साहले स्नेहको सबै क्षति क्षतिपूर्ति गर्दछ।
शरीरको सबैभन्दा गैर-यौन पुरुष भाग
एक महिलाको उत्साह
लुकेका यौन संकेतहरू
कुन पोष्टमा राम्रो हुन्छ कि गर्भवती हुन्छ?
हस्तमैथुनको लागि के उपयोगी छ?
संभोग कसरी हुन्छ?
एक स्त्री किन संभोग अनुभव गर्दैन?
एक चमकदार तरल कसरी गर्ने?
मध्य युग मा र प्राचीन रुस मा चुड़ैल हंट
सम्बन्धमा हेरफेर: सुरक्षा र सुरक्षाको प्रविधि
स्प्रिंग विवाहका फूलहरू
फैशनेबल स्कर्ट - शरद ऋतु-सर्द 2015-2016
वसन्तमा साथीहरूको हेरविचार
उनीहरूले आफ्नै हातले आन्तरिक मासिसकेका थिए
वेबमा पहिले देखि नै "अनुहारमा 50 छायाँहरूमा" सेटको नयाँ तस्बिरहरू
Kalina बाट सिरप
विकास र अन्य मापदण्डहरू Macy विलियम्स
दाँतको लागि हाइड्रोलिक स्ट्रिप्स
मिन्स्क मा महान देशी युद्ध को संग्रहालय
स्कर्टलेट जोहानसन र उनको पतिले सुलभताको बारेमा कुरा गर्ने कारण दिए
स्वत: प्लेको साथ बर्तन
बिल्लियों मा Gingivitis